Ciidanki hore u sugay amniga xarunta Golaha shacabka oo dib loo soo celiyay. – Hornafrik Media Network
Ciidanki hore u sugay amniga xarunta Golaha shacabka oo dib loo soo celiyay.
By HornAfrik	 On Apr 1, 2018
Hornafrik-Ciidamadii hore ee u xil saarnaa sugida amniga xarunta Golaha Shacabka ee Barlamaanka Soomaaliya ayaa dib u la wareegay shaqadii ay ka hayeen xarunta Golaha Shacabka.
Muwaadin Soomaaliyeed oo muddo u xirnaa dambi uusan galin oo Magdhow la siiyay.
Weerar Qarax Ku Bilaawday Oo Ka Dhacay Buulo Mareer.